Xeer -ilaaliyayaasha Shiinaha ayaa leh maya sawir -gacmeedka 'aan caafimaad qabin'
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Shiinaha » Xeer -ilaaliyayaasha Shiinaha ayaa leh maya sawir -gacmeedka 'aan caafimaad qabin'
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Shiinaha • dhaqanka • Wararka Dowladda • Xuquuqda Aadanaha • News • Dadka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Maamulka Shiinaha ayaa ku boorriyay bixiyeyaasha adeegga internetka inay horumariyaan kanaallada iyo aagagga caafimaadka u leh cunnada carruurta iyo dhallinyarada, dadaal dheeraad ah ku bixiyaan xeerka nuxurka iyo turxaan -bixinta barnaamijka, iyo inay gacan ka geystaan ​​dhisidda goob -internet oo ku habboon koritaanka dhallinyarada.
Kartoonnada Shiinaha oo ay ku jiraan dhagarta ama muuqaalka rabshadaha, dhiigga, edeb -darrada ama sawir -gacmeedka.
Bixiyeyaasha adeegga internetka si ay u horumariyaan kanaallo iyo aagag caafimaad qaba oo loogu talagalay isticmaalka carruurta iyo dhallinyarada.
Bixiyeyaasha adeegga internetka ayaa lagu boorriyay inay gacan ka geystaan ​​dhisidda mareegaha internetka oo ku habboon koritaanka dhallinyarada.
Maamulka Raadiyaha iyo Telefishinka Qaranka Shiinaha ayaa ka dhawaajiyay in si buuxda loo diiday sawir gacmeedyada 'ay ku jiraan shirqoollada ama muuqaalka rabshadaha, dhiigga, aflagaadada ama sawir -gacmeedka'.
Calaamadaha ku dheggan gudaha Costco waxay ogeysiiyaan macaamiisha inay sahaydii ka dhammaadeen Maarso 2, 2020, gudaha Cypress, CA. (Sawirka Jeff Gritchen, Diiwaanka Degmada Orange/SCNG)
Bixiyeyaasha adeegga internetka ee barnaamijyada webka maqalka iyo muuqaalka ah waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay abuuraan, soo dejiyaan oo faafiyaan sawir gacmeedyo leh astaamo wanaagsan oo kor u qaadaya wanaagga runta, wanaagga iyo quruxda badan, maamulka baahinta Shiinaha ayaa ku sheegay degelkeeda.
Maamulku wuxuu ku boorriyay bixiyeyaasha adeegga internetka inay horumariyaan kanaallada iyo aagagga caafimaadka u leh cunnada carruurta iyo dhallinyarada, dadaal dheeraad ah ku bixiyaan nidaaminta nuxurka iyo turxaan -bixinta barnaamijka, iyo inay gacan ka geystaan ​​dhisidda goob -internet oo ku habboon koritaanka dhallinyarada.
The Maamulka Raadiyaha iyo Telefishinka Qarankan, oo hore u ahaa Maamulka Gobolka ee Raadiyaha, Filimka, iyo Telefishinka iyo Maamulka Gobolka ee Madbacadda, Daabacaadda, Raadiyaha, Filimka iyo Telefishinka, waa hay'ad fulineed heer wasaaraddeed oo si toos ah hoos timaada Golaha Gobolka ee Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha.
Shaqadeeda ugu weyni waa maamulka iyo kormeerka shirkadaha dawladdu leedahay ee ku hawlan warshadaha telefishanka iyo raadiyaha.
Maamulka Raadiyaha iyo Telefishinka Qaranka ayaa si toos ah u maamula shirkado dowladeed oo heer qaran ah sida Telefishinka Dhexe ee Shiinaha, Raadiyaha Qaranka Shiinaha, iyo Raadiyaha Caalamiga ah ee China, iyo sidoo kale istuudiyaha filimada iyo telefishinka iyo ururro kale oo aan ganacsi ahayn.